Mindroid PRO Unlock 1.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Mindroid PRO Unlock
Mindroid PRO Unlock ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒီ application ကို Mindroid တစ်ခုသော့ဖွင့်သည်
သငျသညျ Mindroid အပေါငျးတို့သ options နဲ့ features တွေကို access လိုလျှင်သော့ဖွင့် install လုပ်ပါ။ အ Mindroid အခမဲ့ဗားရှင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်း install လုပ်ပါ။
Android အတွက် App ကို - Mindroid တစ်ဦး AVS (စိတ်စက်သို့မဟုတ် Psychowalkman ခေါ်အာရုံ Visual စိတ်ကြွဆေး device ကို) ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာသင့်ဦးနှောက်လှိုင်းတံပိုးကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ရန်အတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူတစ် signal ကို (ကွားနိုငျသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံဖြစ်စေ) နဲ့သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို hemisphere အသီးအသီးပေးစွမ်းသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်ပိုပြီးအချက်အလက်အဘို့ဤ ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးဖတ်ရှုပါ။
ဒီ app ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်. သင်တို့စိတ်နှလုံးကို အပန်းဖြေ, ဘာဝနာ, တီထွင်ဖန်တီးမှုသို့မဟုတ်အိပ် ပြည်နယ်ဖြစ်စေသွေးဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကွားနိုငျဆွ featured-အပြည့်အဝနှင့်တစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက် AVS devices များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နားကြပ်ကိုကွားနိုငျဆွထိရောက်သောဖြစ်ရန်အဘို့အမိန့်မှာအသုံးပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်!
Visual ဆွစမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံဆွလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏မျက်စိပိတ်ဖို့နှင့်သင်၏မျက်စိနှင့်သင်၏ display ကိုအပေါ်အနီရောင်အစက်အပြောက်ကိုက်ညီ။
သင်ကို default setting ကိုနှင့်အတူဒဏ်ငွေလျှင်အခမဲ့ Mindroid သုံးစွဲဖို့ကြင်နာစွာကြိုဆိုကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်မရရှိနိုင်ပါအစီအစဉ်များအားသာချက်ယူဖို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့နှင့်အတူရောထွေးခြင်းငှါ, Mindroid သော့ဖွင့်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာ Play Store ကိုစျေးနှုန်း ။ ကျနော်တို့အလွန်သင့်ရဲ့အလှူငွေတန်ဖိုးထားနှင့်ဤ app ကိုနောက်ထပ်တိုးတက်မှုများအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ (Mindroid uninstall ကြပါဘူး) လက်ရှိတပ်ဆင်၏ထိပ်ပေါ်တွင်သော့ဖွင့် install လုပ်ပါ။
Mindroid ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
CAUTION! Mindroid ဆို epileptic သို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရအသုံးပြုသူများကအသုံးပြုတဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်။ သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအိုကေကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤသတိပေးခကျြကိုဖတျရှုခဲ့ကြပြီးသင်ကိုသုံးလိမ့်မည်ဟုသဘောတူ
သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာလျှောက်လွှာ။ ဒီ app ၏စာရေးဆရာ Mindroid ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုအလားအလာကနျြးမာရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်မယူ။
Mindroid PRO Unlock အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Mindroid PRO Unlock အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Mindroid PRO Unlock အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Mindroid PRO Unlock အား အခ်က္ျပပါ
rahullah စတိုး 128.66k 37.74M
Mindroid PRO Unlock ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Mindroid PRO Unlock အခ်က္အလက္
App Name: Mindroid PRO Unlock
File Size: 285.21kB
Release date: 2019-08-13 18:20:12
Mindroid PRO Unlock APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ